नेपालबारे भारतलाई चीनको चुनौती
हिमाल पोष्ट / मङ्सिर , २८ काठमाडौं । चीनले नेपाल ढुवानीका लागि चिनियाँ कार्गो रेल सञ्चालनबारे भारतले दिएको अभिव्यक्तिमा कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतले यस्तो ठाने अन्त्यहीन समस्या निस्कने चेतावनी दिएको
सुनको मूल्य प्रतितोलामा ५० हजार रुपैयाँसम्म झर्ने
हिमाल पोष्ट / २८ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोलामा ५० हजार रुपैयाँसम्म झर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घट्दै गएकाले पनि मूल्य घटेर
अंगीकृत नगरिकतामा दक्षिण एसियामै ‘लचिलो’ नेपाल
हिमाल पोष्ट / २५ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने मामलामा नेपालको संविधान सवैभन्दा लचिलो देखिएको छ । अन्य राष्ट्रले आफ्नो नागरिकसँग विदेश महिला विवाह
दलीय भागबन्डाको दबाबका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय निर्णयविहीन हुँदै
हिमाल पोष्ट / २५ मंसिर, काठमाडौं । विभिन्न आन्दोलन तथा दलीय भागबन्डाको दबाबका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय निर्णयविहीन हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन तथा प्राध्यापकहरूका
कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० पुग्यो
हिमाल पोष्ट / २५ मंसिर, काठमाडौं । कर्मचारीको तलब कति बढ्छ ? उमेर हदबन्दी कति बनाउने ? बढुवा कहिले हुन्छ ? सरूवा कहाँ मिलाउने ? यी निजामति प्रशासन भित्र वर्षभरी
मोर्चासंग डरायो एमाले
हिमाल पोष्ट / २४ मंसिर, काठमाडौं । मधेसी मोर्चाले कार्यक्रम गर्न नदिने धम्की दिएपछि एमालेले वीरगन्जमा आयोजना गरेको दुईदिने भेला स्थगित भएको छ । वीरगन्जको नगर सभागृहमा शुक्रबार र शनिबार
सिजनको बेला बजारमा सुनको अभाव
हिमाल पोष्ट / २४ मंसिर, काठमाडौं । विवाहको मुख्य सिजनमा नेपाली बजारमा सुनको अभाव देखिएको छ । केही समययता सुनको मूल्य घट्दै गएको छ भने बजारमा माग पनि उच्च छ
मोनो रेल सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डले तीव्रगतिमा गृहकार्य
२३ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंमा शहरी पारवहन (मोनो रेल) सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डले तीव्रगतिमा गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । काठमाडौंमा मोनो रेल र मेट्रो रेलको विकास निर्माण र सञ्चालनका लागि
भारतसँगको इन्टरनेट निर्भरता अन्त्य हुँदै
हिमाल पोष्ट / २३ मंसिर, काठमाडौं । अवको केही साताभित्र नेपालको भारतसँग रहेको इन्टरनेट निर्भरता हट्ने भएको छ । नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोबलबीच रसुवाको जिलोङ गेटवे हुँदै चनी
नेपाल र भारतीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता विपरीत क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिका
हिमाल पोष्ट /२३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल र भारतीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता विपरीत भारतले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पिटिएको व्यवस्थाविपरीत भारतीय उर्जा मन्त्रालयले सोमबार
हिमाल पोष्ट /२२ मंसिर, काठमाडौं । पति र पत्नीबीच पत्नीका कारण सम्बन्धविच्छेद भए अंश दाबी गर्न नमिल्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पत्नीले आफ्नै इच्छाले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन अदालतमा
मधेस आन्दोलनका बेला थुप्रै भारतीयले पाए नेपालि नागरिकता
हिमाल पोष्ट /२२ मंसिर, काठमाडौ । पछिल्ला केही वर्षयता सीमा क्षेत्रमा भारतीयले पहुँच नाता सम्बन्धका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने क्रम बढेको पाइन्छ । यसरी नागरिकता लिने जिल्लामा सुनसरी अगाडि